कसले मेरो चीज सार्यो? - Geofumadas
अप्रिल, 2009 जियोस्पाटियल - जीआईएस, GvSIG, IntelliCAD, मितोल्ड GIS, Microstation-बेन्टले, मेरो egeomates, qgis
मलाई वास्तवमै जियोइनफॉर्मेटिक्स मनपर्दछ, लेआउटमा उत्कृष्ट स्वादको साथ पत्रिका हुनु बाहेक, सामग्री भूस्थानिक मामिलामा धेरै राम्रो हुन्छन्। आज अप्रिल संस्करणको घोषणा गरिएको छ, जहाँबाट मैले केही पाठ लिएको छु रातोमा हाइलाइट गरियो तिनीहरूलाई पढ्न उत्प्रेरित गर्न उत्प्रेरित गर्नुहोस्।
En अघिल्लो संस्करणहरू मैले तिनीहरूलाई एक समीक्षा दिएँ, आज मैले पोष्टको विषयको रूपमा खुला स्रोत प्रविधिहरूतर्फ उफ्रिने क्रममा परिवर्तनको प्रतिरोधको बारेमा छोटो तर धेरै गहिरो लेख लिएको छु। यो माउसको त्यो पुरानो कहानीमा आधारित छ जुन मर्नेवाला थियो किनभने यसको चीज समाप्त भयो र अर्को स्रोतको खोजी त्यसका सिद्धान्तहरू विरुद्ध थियो। मैले भर्खर सोचे "तिनीहरू आफ्नो पनीर सारिदिए।"
र यो यो हो कि धेरै चोटि "gpl", "खुला स्रोत", "स्वतन्त्र", "gnu" वा यस्तै अन्य शब्दहरू उल्लेख गर्न हिम्मत गर्नेहरूले आफ्नो निधारमा आँखा राखेर अन्तरिक्ष क्याप्सुल बाहिर एलियनको रूपमा देखा पर्दछन्। हामी विन्डोज लोगो देख्ने बानीमा छौं कि यस डायनासोरमा चल्दैन भनेर सबै कुरा जटिल देखिन्छ, तथ्या it्कले देखाउँदछ, मान्छेहरू उदाहरण दिन मोजिलामा इन्टरनेट एक्सप्लोरर मन पराउँछन्। जियोइनफॉर्मेटिक्सको यस संस्करणमा हामी खुला प्रविधिहरूको बारेमा कुरा गर्न जारी राख्छौं PostGIS र डेटाबेस संग काम गर्ने क्षमता, जुन हामी सोच्दछौं एक राम्रो अभियान हो किनभने तिनीहरू पहिले देखाइएको थियो GvSIG y क्वांटम जीआईएस.
हालैका वर्षहरूमा मैले "अनौपचारिक" प्रोग्रामहरू प्रयोग गरेर परीक्षण गरेका छन् धेरै गुना, Microstation, GvSIGeIntelliCAD; नतीजा उस्तै र अझ राम्रो भएको छ तर यसले मलाई "जटिल" को रूपमा देखेको छ। म स्वीकार गर्दछु, म सामान्यतया हुँ, तर यो विचार गर्न आवश्यक छ कि यस जीवनमा नवीनता खोज्नुपर्दछ, जबसम्म यो चरममा छैन कपालबाट लिइयो; मलाई एन्टिन भ्यान रिजले सम्पादकीय मनपर्थ्यो "Google धरती के हुन सक्दछ, शायद सतह अन्तर्गत"।
म सचेत छु कि विश्व पीसीबाट लिनक्समा धेरै बर्षहरूमा परिवर्तन हुँदैन र सायद कहिले पनि होइन, तर खुला स्रोत प्रविधिहरू एक विषय हो जुन धेरै देशहरूमा ठूलो शक्तिसँग चल्दैछ र नयाँ व्यवसाय मोडेलहरू देखा पर्दैन जबसम्म ठूला संकटहरूमाथि विजय हासिल गर्दैन। चक्रीय, समय हामीलाई सही प्रमाणित गर्दछ। यदि होईन भने फुटबल कोचले भने जस्तै हामीले अनुभव प्राप्त गरिरहेका छौं।
यी दिन मध्ये एक व्यक्तिले बुझ्नु पर्छ कि तपाई AutoCAD ह्याक गरेर बाँच्न सक्नुहुन्न, कि त्यहाँ एक कम सस्तो मूल्य संग IntelliCAD छ र QCad पनि प्रतीकात्मक मूल्यमा; अवश्य पनि, यदि तपाईंसँग पैसा र सम्मान छ भने तपाईंले अटोडेस्कबाट किन्नुपर्नेछ। यो बुझ्न पनि आवश्यक छ कि municipal०० नगरपालिकाहरूले G ,300$,००० को लागि आर्कजीआईएस सर्भर इजाजतपत्र लिन सक्दैन, सबैलाई आवाश्यक पर्दैन (वा अन्य विस्तारहरू पनि), तर यो गर्न सम्भव छ कि (वा अधिक) को साथ विकल्पहरू आर्थिक प्रयोगको लागि जस्तै मनिफोल्ड, ग्लोबल म्यापर, gvSIG, QGis वा घास। मलाई जेम्स फी द्वारा प्रतिबिम्बित मनपर्दछ जुन विडंबनाका साथ भन्छन् "एफटीपी मार्फत पहुँच तपाईंले सबै भन्दा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ? "
अन्तमा, हामी समय खर्च गर्न सक्दछौं र यसको बारेमा कुरा गर्न थुक्छौं, यो सम्भव छ, तर जसले कम मूल्यमा समान गर्न नयाँ तरिकाहरू प्रयास गर्छन् उनीहरू आफैंमा बढी सिक्ने फाइदा लिन सक्छन्। मलाई यस संस्करणमा जियोइनफॉर्मेटिक्सको जिद्दी मनपर्छ, मानिसलाई आवश्यकताको रूपमा आत्म-सिकाइएको अन्तर्ज्ञानको गुट बनाउनको लागि।
यी यी प्रविधिहरू हुन् लोकप्रिय, संदेहमा छ।
... अहिलेको लागि।
ओह, म्यागजिनमा एक नजर राख्नुहोस्, जुन कुरा गर्दछ:
Trimble जूनो एससी
GIS शिक्षा स्कूलमा कसरी छ?
सिटीजीएमएल, प्रविधिमा एक मानक
GIS, ESRI नयाँ प्रकाशनको कार्यान्वयनमा राम्रो अभ्यासहरू
आपदा व्यवस्थापनमा GIS र GRID को एकता
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो के ब्लगले यसको व्यक्तिगत अर्थ गुमाउन सक्छ?
अर्को पोस्ट पहिलो दिनअर्को »